Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. को बन्ला राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर ? – Emountain TV
को बन्ला राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर ?
काठमाडौं, ४ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनर पद आगामी चैत ६ गतेदेखि रिक्त हुँदैछ । पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाल आगामी चैत ६ गतेदेखि सेवा निवृत्त हुँदैहुनुहुन्छ । नेपालको पदावधी सकिने दिन नजिकिएसँगै नयाँ गभर्नर को बन्ने भन्ने दौड अहिले चर्चाको विषय बनेकोछ ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. चिरञ्जीवि नेपालको ५ वर्षे कार्यकाल आगामी चैत पहिलो साता सकिँदैछ । पदावधी सकिनु एक महिना गभर्नरले बिदा बस्ने प्रचलन छ । यस अनुसार फागुणबाटै डा. नेपाल विदा बस्ने हुनेछ । त्यसैले आगामी कार्यकालका लागि गभर्नर बन्न आकांक्षीहरुले दौडधूप तीव्र छ ।
आकांक्षीहरु दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिहरु सक्रिय रहेपनि नेपालको समग्र अर्थतन्त्र सम्हाल्न सक्ने, आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सक्ने आर्थिक नीति ल्याउन सक्ने खालको र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने क्षमतायुक्त गभर्नर आउनु पर्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
गभर्नरले हस्ताक्षर गरेको नोट मात्रै चल्ने भएकाले गभर्नर पद शक्तिशाली मानिन्छ । सरकारको सल्लाहकारको रुपमा राष्ट्र बैंकले काम गर्छ भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिभिजन गर्छ । मौद्रिक नीतिमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्र हाँक्ने स्वायत्त निकाय भएकाले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा योग्य र सक्षम व्यक्तिहरू पुगे भने देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न उनीहरूले ठूलो योगदान दिनेछन् ।
पूँजीबजार पनि बैक तथा वित्तिय संस्थाको बाहुल्यता भएकाले राष्टबैकको नीतिले प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेकोछ । पूँजीबजार विज्ञ आएमा नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुने अपेक्षा धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीको छ ।
अर्थतन्त्र,वित्तिय क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा सबल बनाउन सरकार लागिपरेकोछ । यस क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्न सक्ने व्यत्तिलाई नै सरकारले नियुत्त गर्ने राष्ट्रबैकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बताउनुहुन्छ।
राष्ट्र बैंकका गर्भर्नर अबको दुई महिनापछि खाली हुँदैछ । सेवानिवृत्त हुनु एक महिना अघि गभर्नर बिदा बस्ने प्रचलन छ । यो एक महिनाको अवधीमा सरकारले नयाँ गभर्नरको टुंगो लगाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसको लागि सरकारले नयाँ गभर्नर चयन गर्न सिफारिस समिति बनाउनु पर्छ । तर सरकारले अहिलेसम्म सिफारिस समिति गठन गरेको छैन । तर समिति गठन नगरिएपनि आकांक्षीहरु अर्थमन्त्रीदेखि शक्ति केन्द्रहरुमा धाउने क्रम बढिसकेको छ ।
केही आकांक्षीहरुले आफू अनुकुलका मिडियाहरुमा प्रचारबाजी समेत थालिसकेका छन् । पछिल्लो समय पूँजी बजारलाई बुझेको र राम्रो अर्थ नीति बनाउने भन्दा पनि राजनीतिक प्रभावमा सरकारी नियुक्ति बढ्दो देखिन्छ । पेशागत क्षमता र दक्षता भन्दा राजनीतिक नियुत्ति हाबी हुँदा निजी क्षेत्रका व्यवसायी र उद्योगीहरु चिन्तित देखिन्छन् ।